Gobolka Washington wuxuu ku hogaamiyaa dariiqa xalka tamarta nadiifka ah
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Warshadaha Furaha|Nadiifi Tamarta & Teknolojiyada
Qaybta tikniyoolajiyadda nadiifka ah ee gobolka Washington waxay la shaqeyneysaa warshado kala duwan si ay u siiso tikniyoolajiyadda iyo geedi socodka wax soo saarka la xiriira. Kuwaani waxay horumarin doonaan waxqabadkooda deegaanka iyo ganacsiga. Ahmiyadeena ugu sareysa waa inaan abuurno jawi dhaqaale guud ahaan gobolka, halkaas oo hal-abuurnimada iyo hal-abuurnimadu ay ku bulaali karto oo ay ku abuuri karto shaqooyin mushahar fiican leh.
Nadiifi Istaraatiijiyadda Qeybta Tech
2017-19 Istaraatiijiyadda Waaxda Teknolojiyada Nadaafadda (PDF)
Qeybaha kale ee Muhiimka ah
Waxsoosaarka Beeraha & Cuntada
Sayniska Nolosha / Caafimaadka Adduunka
Milatariga & Difaaca
Nadiifinta Warshadaha Tech Tech Qeexid
Tiknoolajiyada nadiifka ah waxay ka gudubtaa qaybo badan oo warshadeed waxayna u taagan tahay habab badan oo wax soo saar, adeegyo iyo wax soo saar ah. Kuwaas oo dhami waxay ka kooban yihiin waxa loo yaqaan qaybta tikniyoolajiyadda nadiifka ah. Wax soo saarka macaamiisha ee lagu soo saaray qaybtan waxay siinayaan qiimo weyn macaamilka qiimo jaban oo xagga deegaanka ah. Qeyb kasta oo warshadeed waxay soo gudbin doontaa ujeedooyinkeeda waxqabad ee deegaanka. Haddii kuwani ay si aad ah uga weyn yihiin hawlihii hore, ama haddii wax soo saarka ama adeeggu u taagan yahay horumar la taaban karo oo ku yimid qaababkii hore ee wax soo saar, markaa alaabooyinkani waxay u badan tahay inay u qalmaan tixraaca qaybta Tech Tech.
Tusaale ahaan, tiknoolajiyada nadiifka ah ee warshadaha korantada korontada waxaa ka mid noqon kara teknoolojiyad u oggolaaneysa korantada inay ka iibsadaan ama dib uga iibiyaan awood koronto oo badan meelaha laga cusboonaysiin karo. Tan waxaa ku jiri lahaa baytariyada miisaanka korontada ku shaqeeya iyo kuwa nidaamka ilaaliya, iyo sidoo kale softiweerka u oggolaanaya unugyada isku dhafan inay qabsadaan oo ay keenaan tamarta korantada laga helo ilaha la cusboonaysiin karo sidoo kale. Tani waxay ka dhigan tahay in unugyada qoraxda ama dabaysha lagu tixgelin doono warshadaha tiknoolajiyadda nadiifka ah iyo sidoo kale baytariyada, kontoroolayaasha iyo softiweerka la xiriira.
Shirkadaha cusub waa la soo dhaweynayaa
Haddii aad tahay shirkad sahamineysa ama soo saareysa jiilka soo socda alaabada tamarta nadiifka ah, agabyada, fikradaha ama adeegyada u imow Gobolka Washington.
Dhaqankeena hal-abuurnimadu wuxuu ku siinayaa iskaashi firfircoon oo lala yeesho shirkadaha kale ee waxqabadka sare leh, xoog shaqaale xirfad sare leh oo tiknoolajiyad nadiif ah, jawi ganacsi oo hor leh oo soo dhoweeya shirkadaha doonaya inay adduunka ku beddelaan ilaha tamarta cusub iyo jawi dabiici ah oo qurux badan oo kugu dhiirrigelin doona in la abuuro oo lagu guuleysto sahaminta iyo soo saarista tamar cusub oo dalka iyo adduunkaba ah.
Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, la xiriir khabiirkeena tiknoolajiyadda nadiifka ah maanta. Way ku farxi doonaan inay ka jawaabaan su'aalahaaga waxayna ku tusayaan sida xulashada Washington ay u noqon karto go'aanka ganacsi ee ugu fiican ee aad waligaa gaarto.
Saameynta tabarucaadka tikniyoolajiyadda nadiifka ah ee warshadaha
Warshadaha tiknoolajiyada nadiifka ah ee gobolka Washington waxaa ka shaqeeya ku dhowaad 90,000 oo shaqaale ah waxaana taageeraya in ka badan hal bilyan oo doolar oo ah caasimada ganacsiga. Shirkadahan waxaa taageera hay'ado cilmi baaris heer caalami ah oo ay ka mid yihiin Pacific Northwest National Laboratory, Jaamacadda Washington iyo Washington State University.
Shirkadahaani waxay diyaar u yihiin inay gacan weyn ka geystaan ​​baahida adduunka ee geeddi-socodka warshadaha nadiifka ah. Ururada ganacsiga iyo warshadaha muhiimka ah waxaa ka mid ah Washington Clean Technology Alliance, Washington Technology Association Association iyo Northwest Energy Karti Council.
Qaybta Tiknoolajiyadda Washington ee 'Clean Tech'
100+ shirkadood, oo leh 195 shatiyo u adeega in ka badan 12 qaybood oo warshado kala duwan ah
Taageerada dadweynaha ee waaxda Tech Tech ee Washington
Gobolka Washington wuxuu saami weyn ku leeyahay mustaqbalka tamarta la cusboonaysiin karo iyo nadiif. Sharci dejinta gobolka ayaa amar ku bixisay in 15 boqolkiiba korantada Washington ay ka timaaddo ilaha tamarta cusub, oo ay ku jiraan dabaysha, hirarka, biomass, biofuel iyo qoraxda. Tani waxay horseeday maalgashi waaxeed gaar loo leeyahay oo muhiim ah teknoolojiyada jiilka soo socda ee qaybta Tech Tech.
Si loo soo jiito maalgashi, gobolku wuxuu bixiyaa dhiirigelinno kala duwan, oo ay ka mid yihiin:
Dhimista canshuuraha ganacsiga iyo shaqada ee soo saarayaasha nidaamyada tamarta qoraxda
Qaybaha ama qalabka semiconductor
Iibinta iyo cashuur dhaafka gaaska semiconductor iyo iibsiga kiimikada
Iibka iyo dhibcaha canshuurta ee qalabka dhaliya korantada iyadoo la adeegsanayo tamar dib loo cusboonaysiin karo
Ganacsiga amaahda amaahda canshuuraha shaqada iyo ka dhaafida canshuuraha iibka kuwa goosta biomass-ka keymaha
Fikradaha cusub ayaa lagu dhiiri geliyaa dhammaan heerarka, laga bilaabo isticmaalka waqtiga dhabta ah ee xisaabta iyo sayniska xisaabinta kumbuyuutarka si loo hagaajiyo maareynta shabakadda korontada iyo xakamaynta iyo isticmaalka algae si loo abuuro ilo shidaal oo tamarta ku habboon u leh matoorrada quwadda soo saara iyo kuwa wax soo saarka qorraxda oo aad u hufan.
CleanTech Business Boom
Sharelynn Moore - Itron, Inc.
Jud Virden - Pacific NW Nat'l Lab
Mark Reddemann - Tamarta NW
Daniel Schwartz - Jaamacadda WA
Curtis Kirkeby - Adeegyada Avista
Agaasimaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Waaxda Teknolojiyada Nadiifka ah
Ma xiisaynaysaa fursadaha ganacsi ee ka jira warshadaha tiknoolajiyadda nadiifka ah ee Washington? Booqo DooroWashington.com si aad wax badan ka bartaan.